Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Club Wyndham Flynns Beach Resort okpukpu abụọ
Akụkọ na -agbasa Australia • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Resorts
Club Wyndham Flynns Beach dị njikere iwetakwu ndị njem na mpaghara Port Macquarie. Port Macquarie bụ obodo gbara osimiri okirikiri na mpaghara ime obodo Port Macquarie-Hastings. Ọ dị na Mid North Coast nke New South Wales, Australia, ihe dịka 390 km north of Sydney, na 570 km south of Brisbane, Australia.
Mmepe klọb Wyndham Flynns Beach gbakwunyere ụlọ ime ụlọ 53 nwere ime ụlọ anọ, nke akpọrọ 20 dị ka Deluxe, 25 dị ka Ukwu, yana asatọ dị ka onye isi ala. Emebere ụlọ ndị isi ụlọ nwere ọnụ ụlọ anọ, ọkachasị, dị ka ngwaahịa na-enweghị atụ n'ime mpaghara ahụ, na-egosipụta ụlọ ime ụlọ anọ sara mbara, ime ụlọ ịwụ anọ, kichin zuru oke, ebe a na-asa akwa, akwa ala nkeonwe nke nwere spa n'èzí, na nnukwu mbara ihu dị n'elu. , na akwa akwa na ngwụcha.
N'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, mmepe $ 25 nde ahụ nyere ndị ọrụ na ndị ọkachamara 220 ọrụ ma gbasaa ebe obibi nke ebe obibi ahụ na ụlọ 113 na Villas. Ihe oru ngo ahụ hụkwara kafe ọhụrụ, mpaghara egwuregwu, ọdọ mmiri ụmụaka, ebe a na -ewu ewu na ebe a na -adọba ụgbọala, yana mgbatị ahụ nwere ume ọhụrụ na nnabata nke edozigharịrị.
“Tupu mmepe a na ọrịa COVID-19, ebe a na-eme njem nwere ọrịre nke ihe karịrị pasent 90 na nkezi wee nye ihe ruru nde $ 20 kwa afọ na akụ na ụba mpaghara ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ site na mmefu ndị ọbịa-ọnụọgụ nke anyị na-atụ anya ugbu a. mmụba, ”Barry Robinson, Onye isi ala na onye isi njikwa, ọrụ mba ụwa nke Wyndham Destinations kwuru.
“Site na ịgbakwunye ebe obibi a dị oke ọnụ, imepụta akụrụngwa ọhụrụ na ịkwalite ndị dị ugbu a, anyị kwenyere na ọ ga-adọta nnukwu mkpa maka ebe ezumike anyị, na ime nke a, kwalite ịma mma nke Port Macquarie, nke ga-enye nkwalite mpaghara post-COVID. -19 mgbake. ”
Ọrụ ahụ malitere na Mee 2019 mana onye nrụpụta, Wyndham Destinations Asia Pacific, kpebiri ịga n'ihu na ọrụ n'oge ọrịa COVID-19 na-atụ anya na mpaghara ahụ ga-enweta mgbake zuru oke.
Onye isi obodo Peta Pinson kwuru, "Mmepe a karịrị nde $ 25 na -egosi ntụkwasị obi Wyndham Destinations nwere na Port Macquarie Hastings dị ka ebe na -eduga njem nlegharị anya na New South Wales."
“Ihe oru ngo a enyela mkpali akụ na ụba nke obodo anyị nabatara nke ọma, ọtụtụ ọrụ obodo na ọbịbịa ọhụrụ maka ndị ọbịa anyị. Nke a bụ nnukwu mgbakwunye na mpaghara anyị, yana ọtụtụ ọrụ nde kwuru nde nke mpaghara anyị na-ahụ n'oge a. ”
Club Wyndham Flynns Beach dị na Mid North Coast nke New South Wales, naanị ụgbọ elu otu awa ma ọ bụ ụgbọ awa anọ site na Sydney. Ọ na-enye ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka, atụmatụ enyi na enyi na ịkwụ ụgwọ maka ọtụtụ ngwa na egwuregwu dị n'èzí.
Wyndham South Pacific na -ejikwa Wyndham Destinations Asia Pacific, akụkụ ya
Ụgbọ elu Calgary ọhụrụ na Seattle na WestJet ugbu a